Hooyada dhashay Caisha Ilyaas oo Cadaalad Dalbatay. – The Voice of Northeastern Kenya
Hooyada dhashay Caisha Ilyaas oo Cadaalad Dalbatay.
Hooyada dhashay gabadh Yar oo lagu magacaabi jiray Caasha Ilyaas Adan oo bilowgii Sanadkaan lagu kufsaday magaalada Galkacyo kadibna lagu dilay ayaa sheegtay inays gabadheeda dilkii loo gaystay wali cadaalad u helin.
Saynab Cabdiwahaab Xareed oo ah hooyadda dhashay Marxuumad Caasho Ilyaas Aadan oo 25 Feb ee sanadkaan 2019 kufsi iyo dil loogu geystay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegtay in gabadheedii oo ku dhawaad labo bilood duugan shalay loogu imaaday baaritaano kale waxayna madaxweynaha Puntland ka codsatay inay cadaalada u hesho gabadheeda ayadoo laamaha baaritaanada ka dalbatay in garsoorka ku wareejiyaan kiiska gabadheed.
Caaisha Ilyaas Adan oo ahayd gabadh ardayad ah oo ku noolayd magaalada Gaalacyo ayaa dabayaaqadii bishii labaad ee sanadkaan waxaa maykeeda la soo hordhigay gurigooda kadib maalmo la waysanaa waxaana xiligaas la cadeeyay in gabadha Kufsi iyo dil la isugu daray ayadoo dad dhacdadaas lala xiriirinayana ay ciidamada amaanku gacanta ku dhigeen.
← Gudoonka aqalka sare ee Soomaaliya oo dalbaday in la xaliyo Tabashada Soomaaliland.
Khasaaraha Qaraxii galabta: Booliska oo war soo saaray →